यसरी पुग्यो विश्वको आधा जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा, नेपालको चाँहि कति पुग्यो ? हेर्नुस् पूरा खबर-Nepali online news portal
यसरी पुग्यो विश्वको आधा जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा, नेपालको चाँहि कति पुग्यो ? हेर्नुस् पूरा खबर
इन्फर्मेसन सोसाइटी मापन प्रतिवेदनले विश्वको आधा जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच पुगेको देखाएको छ । दशौँ संस्करणका रूपमा केही दिनअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनले यस वर्षको अन्तिमसम्म विश्वको ५१ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९० लाख जनसंख्याले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । अझै ३ अर्ब ८० करोड जनसंख्या भने इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढै छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार विकशित मुलुकमा पाँचजनामा ४ जना अनलाइन रहेका हुन्छन् । विकासशील देशमा ४७ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसक्दा अल्पविकसित मुलुकमा भने पाँचजनामा ४ जना अझै अनलाइनको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । आइटियूको लक्ष्यअनुसार सन् २०२३ सम्म ७० प्रतिशत तथा २०२५ सम्म ७५ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच पु-याइसक्नुपर्नेछ ।
नेपालमा भने इन्टरनेट पहुँच ५४ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । यस वर्षको प्रतिवेदनले विश्व दूरसञ्चार तथा आइसिटी क्षेत्रको तथ्यांकलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेको छ । आइटियू सदस्य राष्ट्रका नियामक सहभागितामा यसै वर्ष युएईमा आयोजित सम्मेलनले चारवर्षे रणनीतिक तथा वित्तीय योजना स्वीकृत गरेको थियो । जसमा आइसिटीको पहुँच र प्रयोगको तथ्यांकको सन्दर्भमा स्पष्ट लक्ष्यसमेत तय गरेको छ ।
समावेशी सूचना समाज निर्माणमा यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको आइटियूको दूरसञ्चार विकास ब्युरोका निर्देशक ब्राहिम सनउले उल्लेख गरेका छन् । ‘यसले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विकासका अवसरलाई जनतामाझ पु-याउन नयाँ मौका सिर्जना गरेको छ, कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने दिशामा यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिवेदनले सदस्य राष्ट्रहरूका नीति–निर्माता, आइसिटी उद्योगलगायतलाई समावेशी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मूल्यवान् हुनेछ ।’
पछिल्लो एक दशक अवधिमा फिक्स्ड लाइन भ्वाइस सेवाबाहेक सबै सूचकहरू माथि उक्लिँदै आएका छन् । खास गरेर मोबाइल पहुँचले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पु-याएको छ । सन् २००७ मा ४ प्रतिशतमा रहेको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड २०१८ मा आइपुग्दा ७० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ । त्यसका अतिरिक्त विश्वभरका अधिकांश जनता थ्रिजी तथा उच्च गतिमा इन्टरनेट नेटवर्कमा पहुँच बनाउन सक्ने बनाएको छ । मोबाइल सेलुलर, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड र फिक्स ब्रोडब्यान्डले आइसिटीको पहुँचलाई सहज बनाउने दिशामा समेत सकारात्मक सूचकका रूपमा काम गरेको छ । यद्यपि, आइसिटीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सकारात्मक परिणामका लागि भने सामान्य प्राविधिक सीप वृद्धिको आवश्यकता रहेको आइटियूले जनाएको छ ।
दूरसञ्चारको विश्व बजार १७ खर्ब डलर
विश्वभर दूरसञ्चार क्षेत्रको बजार १७ खर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १ हजार ९०४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान करिब विश्वको औसत बराबर नै छ । यद्यपि, पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी भने घट्दै गएको छ ।
प्रतिप्रयोगकर्ता आम्दानीमा नेपाल पछाडि
मोबाइलमा प्रतिप्रयोगकर्ता औसत आम्दानीमा नेपाल पुछारमा देखिएको छ । प्रतिप्रयोगकर्ता २ सय ३५ रुपैयाँ आम्दानी रहेको नेपाल आइटियूका १ सय ४२ सदस्य राष्ट्रमध्ये १ सय ३१औँ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपालको प्रतिप्रयोगकर्ता आम्दानी २ सय ५० रुपैयाँ रहेको थियो । जब कि पहिलो नम्बरमा रहेको मोनाकोको प्रतिप्रयोगकर्ता मासिक आम्दानी १५ हजार ६ सय रुपैयाँ छ ।